Semeru, Semeru - जावा
ठेगाना: Pasrujambe Lumajang Regency, पूर्वी जावा इंडोनेशिया
ऊँचाई: 3676 m
जावा द्वीपमा सबैभन्दा उच्च ज्वालामुखी मध्ये एक सेमीेरो (सेमेरू) हो, यो पनि मुमोमेरु (महमेरु) पनि भनिन्छ। यो टेंडर क्याल्डर (ज्वालामुखी परिसर) को दक्षिणी भाग मा स्थित छ र सक्रिय छ।
1818 बाट 55 ज्वालामुखी विष्फोटहरू थिए, जुन ठूलो मात्रामा विनाश र मानव हतियार सहित थिए। 1967 देखि सेडर लगातार सक्रिय छ। यो बाट आश र धुवाँका बादलहरू, साथसाथै पैरोक्लिक सामग्री। अन्तराल 20 देखि 30 मिनेट सम्म हो। यी प्रक्रियाहरू दक्षिण अफ्रिकामा धेरै सक्रिय छन्।
सबैभन्दा भयानक विष्फोट 1981 मा भयो, जब बिरुवाको वर्षाले ठूलो भू-भागको निर्माण भोग्यो। उनीहरूको जन्म पछि, निकटतम बसोबासका 152 जना व्यक्ति घाइते भएका थिए, र 120 पार्वतीहरू हराएका थिए। 1 999 मा, दुई पर्वतारोहीहरू बलात्कारी टुक्राहरूबाट मरे, र7महिनामा विस्फोट भयो, जसले धेरै ज्वालामुखीहरूको मृत्यु भयो।
सात हाम्रो ग्रहमा सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी मध्ये एक हो। यसको नाम "ठूलो पर्वत" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ। उच्चतम बिंदु समुद्री स्तर देखि 3676 मीटर सम्म पुग्छ, र ज्वालामुखी आफैले basalts र oresites को हुन्छन्। वस्तुको भौगोलिक इतिहास अध्ययन गर्न XIX सदीमा मात्र सुरु भयो।
यो ट्यानरन को प्रभाव को तहत बनाइयो र पृथ्वी को क्रस्ट मा दोष र चुम्बन को बहिर्गन्ध मा गठित भएको थियो। ज्वालामुखीले लाटा झीलहरू भरिएको भित्तामा टाढा धेरै टाढा-फलामको टुक्राहरू (मार्स) छन्। तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो को गहिराई 220 मीटर हो, चौडाईमा 500 देखि 650 मीटर सम्म फरक हुन्छ।
मलबे लिमजंग शहर नजिक पुग्छ। यो आबादी क्षेत्र घास र ऐश संग बाढीको दैनिक खतरामा छ।
Semeru को भ्रमण को विशिष्टता
ज्वालामुखी को उत्तरार्ध रणूपानी (रानुमुनी) को गाँउ मा शुरू हुन्छ। भ्रमण सामान्यतया 3-4 दिन लाग्छ र तपाईंको भौतिक क्षमतामा निर्भर गर्दछ। प्रायः पर्यटकहरू खर्च गर्छन्:
चढ्न - 2-3 दिन;
वंशमा - 1 दिन।
पहाडको माथि चढेर तपाईं स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ (हराएको मौका हो कि सम्झना) वा एक गाइड संग। सबै पर्वतारोहीहरू सिमरको आधिकारिक कार्यालयमा चढ्नको लागि एक विशेष परमिट प्राप्त गर्नु पर्दछ जुन गाँउमा छ। यहाँ तपाईंले ज्वालामुखी, क्षेत्रको नक्सा र उपकरणको बारेमा सबै आवश्यक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ:
तातो कपडाहरू, आदि
मार्ग आफै लामो र जटिल छ। यो2भागमा विभाजित छ:
गाँउबाट आधार शिविर कलिमती (कलिमती), जहाँ तिमी आराम गर्न सक्दछौ, खान र ऊंचाईमा प्रयोग गर्न सक्नेछौ, जुन समुद्री स्तर भन्दा 2700 मिटर भन्दा माथि छ। यो यात्रा लगभग 8 घण्टा लाग्छ र बिहानै सुरु हुन्छ। यहाँ तपाईंले सुरम्य पोखरी Ranu Kumbolo देख्नुहुनेछ, जहाँ स्विमिंग निषिद्ध छ। तालाब मा पानी क्रिस्टल स्पष्ट छ, त्यसैले यो खाना पकाउन र पिउन प्रयोग गरिन्छ।
शिविरबाट पर्वतको माथिबाट। सामान्यतया यस बिन्दु देखि उत्तेजित 23:00 मा सुरू हुन्छ, त्यसैले पर्यटकहरु ज्वालामुखी मा सुत्न सक्दछ। यो यात्रा4घण्टा लाग्छ। यो खरानी हेर्नको लागि यो धेरै खतरनाक छ, यद्यपि यो रोचक छ: तपाईं विष्फोटको समयमा पत्थरहरूले गम्भीर घाइते हुनसक्दछ।
माथिको हावाको तापमान0डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुन सक्छ। पर्वतको विजयको लागि सबैभन्दा राम्रो समय मईदेखि जुलाई सम्म हो। सेमेरू ज्वालामुखी को उत्तेजित मा वृद्धि गरिएको भूगर्भ गतिविधि को अवधि मा निषिद्ध गरिन्छ। गाँउहरूमा, साना होटलहरू बनाइएका छन्, जहाँ तपाइँ यस प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
निकटतम बस्ती बाट रानीपन मा पहुंचने को लागी यो एक मिनिबस मा या मोटरसाइकिल मा एक मोटरसाइकल संभव छ: Jl। Nasional III या Jalan राया Madiun - Nganjuk / Jl। राया मडुन - सुरबाया।
मृत सागरको स्क्रोल: एक पुरातन बाइबल वा "दोस्रो येशू" को अस्तित्वको प्रमाण?
बर्तनको लागि खडा हुनुहोस्
पन्तिका को परिपक्वता 0
भेनिसमा के हेर्नु हुन्छ?
मेकअप गुलाबी टोनमा
बेडरूम नीलो टोनमा
लेजर आर्टिकल मा स्त्री रोग
सलाद "ओलिभियर" -9जना प्रसिद्ध पकवानको लागि सबैभन्दा असामान्य व्यञ्जनहरु
गर्मीको निवासमा बालबालिकाको लागी?
सामन को एपेटाइजर
अदरकको मूल कसरी उपयोगी छ?
नीलमणि र हीराको साथ बालुवा
नाओमी क्याम्पबेलले आफ्नो प्रेमीलाई नयाँ प्रेमीसँग पुष्टि गरे
छाला जैकेट 2016
एक लामो कपडाको लागि कपाल पसल